kurovedza muviri kuti uite mune yekurovedza muviri yakanyatso kukwana | Bezzia
Kana iwe uchiri kusaziva pekutanga mujimu, isu tinokubatsira nazvo. Nekuti ichokwadi kuti dzimwe nguva tinotanga kuita nhevedzano, kudzidzisa chete rimwe boka remhasuru uye chinhu chakanaka ndechekuti tinozvipira kune akati wandei, kana kuchinjanisa mumazuva kana mukurovedza, sezvaunoda. Iwe unoda kuziva iyo kurovedza muviri kuti uite mukurovedza muviri?
Zvirokwazvo mazhinji acho iwe unotoziva, asi isu tichakuudza kuti ndedzipi dzinogona kuve dzakanyanya kukwana kwauri. Nekudaro, iwe unozokwanisa kusiya yako kudzidziswa yakavandudzwa zvachose kana kuvandudzwa, uchiziva izvozvo nekungoita maekisesaizi mashoma unenge uchirovedza muviri wese. Haisi imwe yemazano makuru? Zvakanaka, usarasikirwa nezvose zvinotevera.
1 Chidhinha chemauto, chiitiko chekutanga chemapfudzi
2 Dhonza-up kumusana
3 Bhenji rinodhinda pakati pekurovedza muviri kuti uite mune yekurovedza muviri
4 Iwe unodzidzira musana wako nemakumbo neakafa
Chidhinha chemauto, chiitiko chekutanga chemapfudzi
Pamwe pamba hauna zviyero kana mabhawa, saka imwe yemaekisesaizi ekuita mune yekurovedza ndiyo iyi. Zvayo ndezve muchina wekudhinda wemauto uyo unozoita kuti isu tishandise mafudzi. Kunyangwe musana uchabatanidzwawo neimwe nzira. Kuti tiite izvi, tinogona kutora zvimwe zviyero kana zvidhoma muruoko rumwe, kunyange kana iwe uchida iwe unogona kuzvibatsira nebhawa uye nekuisa diski kumagumo ese. Izvi zvinokutendera iwe kusimudza huremu hunokodzera zvaunoda. Chiitwa chinosanganisira kuchengetedza magokora akakotama, kuchengeta maoko pachipfuva, kufamba kusimudza maoko pamusoro pemusoro, kusvika pakuatambanudza. Iko kusimudzira kwepamusoro kwatichawana mukudzokorora kwakawanda.
Zvinogona zvakare kunge iwe uine mudziyo kwavari pamadziro eimba yako, kunyangwe mune yekurovedza muviri isu tichakuudza kuti uchadaro. Kunyangwe Icho chimwe chevanonyanya kukumbirwa kuti vakwanise kushandira kumashurea, zvakare ine vazhinji vanokanganisa. Nekuti hazvisi nyore nguva dzose kuzviwana. Kubva panguva yavanobuda, ipapo uchaona kuti inotevera ichave ichiri nani pane yapfuura uye kurudziro, zvakanyanya. Icho chiitiko chakazara nekuti maoko uye kunyangwe iwo musimboti uchabatanidzwawo mazviri.
Bhenji rinodhinda pakati pekurovedza muviri kuti uite mune yekurovedza muviri
Hongu, ndeimwe yeanozivikanwa uye akazara kwazvo. Sezvo mune ino kesi tichave tichirovedza pectoral pamwe nemapendekete. Kuti tiite izvi, tinofanirwa kurara nemusana pabhenji. Wobva waisa tsoka dzako pasi, tenga kubwinya kwako uye umise scapulae yako. Kutora bhaa uye huremu hwatichadzika pasi pakukwirira kweiyo sternum kana zvishoma pasi. patinosvika pairi, isu tinodzokera kumusoro yakadzika nekuwedzera, asi ehe, kudzikira kuchanonoka. Kufema uye kuisa pfungwa kunofanirwa kuenda nesu nguva dzese kuti tirege kurasikirwa nechiyero.
Iwe unodzidzira musana wako nemakumbo neakafa
Ehe, iye ndomumwe wema greats anga asingade kupotsa chiitiko ichi chekuratidzira futi. Ose kumashure, hudyu kana chiuno pamwe nemakumbo zvichazotambura iko kurovera kwekufa. Unogona kuzviita zvese nemabhuru uye nebhawa, zvinoenderana nesarudzo yako yemahara. Apo patinodzikisa huremu nemaoko edu, makumbo anofanirwa kuchinjika, nepo musana wakachengetwa wakamira uye isu tichizendamira muviri kumberi. Asi uchiyeuka kuti iwe unofanirwa kusundira chipfuva chako kunze, kuti usasundire bhawa kure zvakanyanya kumberi. Tichatora iri padhuze nemuviri sezvinobvira kuti tirege kuita mafambiro anogona kukuvadza musana wedu.
Mune ino kesi, pamusoro pemakumbo, isu tiri kuenda zvakare kunoshanda iyo quadriceps uyezve, iyo lumbar chikamu. Saka ndeimwe yemakuru atinayo muhupenyu hwedu uye pakati pezviitwa zvekuita mune yekurovedza muviri. Iwo ndeimwe yemienzaniso yakajeka yekuti isu tinofanirwa kuchengetedza musana wedu wakatwasuka, nepo tsoka kana mabvi asingavhure zvakanyanya. Iwe unofanirwa kudzivirira izvo kana uchienda pasi iwe unokanganisa kuunza mabvi ako pamwechete kana kufamba zvakanyanya. Nekudaro, isu tinofanirwa kugadzirisa huremu sezvo isu tine zvakawanda kana zvishoma maitiro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Utano » Exercise » Maekisesaizi ekuti uite mune yekurovedza muviri yakakwana kwazvo